डा. बाबुरामकी छोरी मानुषी बारे केपी ओलीले सतथ्य बोल्नुभएको भन्दै सूर्य थापाले दिए प्रमाण – " कञ्चनजंगा News "
डा. बाबुरामकी छोरी मानुषी बारे केपी ओलीले सतथ्य बोल्नुभएको भन्दै सूर्य थापाले दिए प्रमाण
No Comments on डा. बाबुरामकी छोरी मानुषी बारे केपी ओलीले सतथ्य बोल्नुभएको भन्दै सूर्य थापाले दिए प्रमाण
काठमाडौ । जनताका छोराछोरीको काँधमा जनयुद्धको भारी र हतियार बोकाएर आफ्ना छोराछोरी विदेश पढाएको भन्दै नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्व माओवादी नेताको आलोचना गर्नुभएको थियो ।
त्यसमापनि पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकी छोरी तथा जनता समाजवादी पार्टीकी नेतृ मानुषी यमी भट्टराईको विदेश अध्ययनको आम्दानी के हो ?
आफ्ना छोराछोरी विदेश पढाएर जनताका छोराछोरीको काँधमा जनयुद्धको भारी र हतियार बोकाउने बाबुराम जी जवाफ दिनुस् भन्नुभएको थियो ।
त्यसलाई उक्त टिप्पणीमा मानुषीले राजनीतिलाई कतिन्जेल हावादारी र मजाक बनाउने ? भन्दै उल्टै ओलीलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो । तर उक्त विषयमा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले प्रमाण नै पेश गर्नुभएको छ । सामाजिक सञ्जाललाई क्रेडिट दिएर उहाँले ओलीले सतथ्य बोल्नुभएको दावी गर्नुभएको छ ।
तथ्य स्वयं बोल्छ
जनताका छोराछोरीको काँधमा जनयुद्धको भारी र हतियार बोकाएर
आफ्नी प्यारी छोरीचाहिँ बेलायत, देहरादुन, दार्जिलिङ र नयाँदिल्लीका महंगा स्कुलमा ?
केपी शर्मा ओलीले सतथ्य नै बोल्नुभएको छ ः
मानुषी यमी भट्टराई श्रेष्ठले प्रारम्भिक शिक्षाको शुरुवात काठमाडौंकै स्वर्णीम स्कूलबाट थालनी गरेकी हुन्। नर्सरीदेखि केजीसम्म त्यहाँ पढेपछि १ र २ कोटेश्वरस्थित नवज्योति स्कूलमा पढिन्।
मानुषीले कक्षा ६ र ७ भारतको नैनीतालको सेन्ट जोन्स् स्कूलबाट पूरा गरिन्। कक्षा ८ देखि १० सम्म दार्जीलिङ पेदोङस्थित सेन्ट जर्जेज् स्कूलबाट पूरा गरेकी मानुषीले कक्षा ११ र १२ को पढाइचाहिँ नयाँ दिल्लीस्थित नवयुग स्कूलबाट पूरा गरेकी मानुषीले स्नातक भारत र स्नातकोत्तर नेपालबाट गरेकी हुन् र जे एन युनिभर्सिटीबाट अहिले विद्यावारिधि गरिरहेकी छिन्।
कपी ः सोसल मिडियामै भेटिएको
पुनश्चः प्रश्न मानुषिप्रति हुँदै होइन, डा. बाबुराम भट्टराईप्रति हो। युद्धकालमा शिक्षक, विध्यार्थी र विध्यालयहरूलक्षित गरिएका ज्यादति त नेपाली समाजले बिर्सन सक्दैन। अझ यिनैले अरूलाई उपदेश दिएको र पानी माथिको ओभानो बनेको पो मिलेन ।
← अफगानिस्तानको कहालिलाग्दो अवस्था : आफ्नै बाबुले घर खर्चको लागि नजिकै बसेकी छोरीलाई २२०० डलरमा बेचिदिए → भक्तपूरमा १० वर्ष देखि वेवारिसे भवनको भित्री कथा यस्तो छ